श्रृंखलाको लागि सबै लागे, अनुष्का एक्लै ! 'मिस वर्ल्ड' मा 'भिजिट नेपाल' को प्रचार गर्दैछिन् (भिडियो) - Gandak News
श्रृंखलाको लागि सबै लागे, अनुष्का एक्लै ! ‘मिस वर्ल्ड’ मा ‘भिजिट नेपाल’ को प्रचार गर्दैछिन् (भिडियो)
गण्डक न्यूज द्वारा १६ मंसिर २०७६, सोमबार १४:५६ मा प्रकाशित
‘मिस नेपाल वर्ल्ड’ अनुष्का श्रेष्ठ अहिले लण्डनमा छिन् । डिसेम्बर १४ मा हुने ‘मिस वर्ल्ड’मा सहभागी हुन उनी त्यहाँ पुगेकी हुन् । उनले त्यहाँ नेपालको प्रतिनिधित्व गरिरहेकी छिन् ।
तर अनुष्काको चर्चा श्रृंखला खतिवडा जस्तो भएको छ्रन । गत वर्ष श्रृंखलाको लागि सारा नेपाली लागिपरेका थिए र उनले विधागत अवार्ड पनि जित्न सफल भएकी थिईन् । श्रृंखला जस्तै ‘ब्युटी विथ अ पर्पज अवार्ड’ मिस नेपाल २०१३ ईशानी श्रेष्ठले पनि जितेकी थिईन् । उनको पनि चर्चा भएको थिए । श्रृंखलाको लागि सबै लागिपरे । उनी नेकपा नेताहरु विरोध खतिवडा र मनु खतिवडाकी छोरी पनि हुन् ।
अनुष्कासँगै लण्डनमा १२४ देशका सुन्दरीहरु पनि उपस्थित छन् । मिस वर्ल्डको तयारीसँगै अनुष्काले आफ्नो देशको प्रचार–प्रसार पनि गरिरहेकी छिन् । उनले ‘भिजिट नेपाल २०२०’ लाई विशेष रुपमा प्रचार गरिरहेकी छिन् ।
लण्डनमा उपस्थित भएका विभिन्न देशका सुन्दरीहरुलाई अनुष्काले भिजिट नेपाल २०२० को विषयमा जानकारी दिइरहेकी छिन् । उनले सुन्दरीहरुलाई नेपाल घुम्न बोलाएकी पनि छिन् । उनले नेपालको विभिन्न ठाउँ र साहसिक खेलहरुको विषयमा बताएकी पनि छिन् ।
सुन्दरीहरुलाई नेपालको बारेमा बताएको भिडियो उनले आफ्नो सामाजिक संजालमा पोष्ट गरेकी छिन् । उनले पोस्ट गरेको भिडियोमा निम्तो पाएका सुन्दरीहरु पनि उत्साहित देखिन्छन् ।
उनले अन्य सुन्दरीहरुलाई नेपाल सगरमाथाको देश भएको भन्दै आफ्नो देशलाई चिनाइरहेकी छिन् । अनुष्काको यो प्रचारले भिजिट नेपाल २०२० लाई विशेष सहयोग हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।